Xidigiska iyo xidaarka (laxaha iyo wanka) – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeMAQAALLOXidigiska iyo xidaarka (laxaha iyo wanka)
Xidigiska iyo xidaarka (laxaha iyo wanka)
BURJIGA WANKA (LAXAHA:=Aries ZODIAC SIGN)
July 8, 2021 Admin@ MAQAALLO 0
Noociisu waa: Dab
Tayadiisuna waa: Aas-aasi
Midabkiisuna waa: Cassaan
Maalintiisuna waa: Talaada
Dhagaxa burjigani waa: Diamond, Topaz & Sapphire
Geedka burjigu waa: Honeysuckle
Meeraha hogaamiyaa waa: Saxal-guduud
Burjidaya ay heshiiska yihiin waa: Miisaanka & Libaaxa
Tirsiga tira nasiibku waa: 1, 8, 17
Xiliga burjigani waa: March 21 – April 19
DHAQAMADA BURJIGA WANKA (LAXAHA)
Awoodda burjiga Wanku(laxuhu) waa Geesinimo, go’aan-qaadasho, kalsooni, xamaasad, rajo-wanaag, daacad-nimo & dulqaad. Nugaylkiisuna waa Samir-yari, murugo, dulqaad-yari, sal-fudayd & gacan ka hadal. Dadka dhasha xilliga burjiga wanku (laxuhu) waxay jecelyihiin xarragada, qaadashada doorka hogaaminta, jidh-dhiska, ciyaaraha gaar’ahaan kuwa goonida loo ciyaaro. Dhanka kale dadka dhasha xilliga burjiga wanku (laxuhu) waxay necebyihiin, iska fadhiga, habsaanka, shaqooyinka aan lagu qaban kartida & hibada.
Ahaanta uu yahay burjiga u horeeya, burjiyadu wuxuu had iyo jeer astaan u tahay bilowga firfircoonaanta iyo qasnaanta maxaa yeelay dadka dhasha burjigani waxay si joogta ah u doonnaan firfircoonida, degdega iyo tartanka, waxayna noqdaan ama gallaan kaalinta koowaad waxkasta. Laga bilaabo shaqada ilaa kulamada bulshada dhexdooda. Sababtuna waa meeraha hogaamiya oo ah saxal-guduud iyo ahaantooda ay yihiin mid ka mid ah burjiyada dabka. Oo labada kale yihiin (Libaaxa & Qaansoolaha), burjiga wanku (laxuhu) waa ka ugu firfircoon burjiyada. Waxaa na dabeecadooda ka mid ah in ay tallaabo qaadaan, mararka qaar iyagoon si fiican uga fikirin.Qoraxda oo ah mid sharafti lihi waxay siisaa iyaga xirfado isku duba ridan, markaa waxaa dhif iyo naadir ah in aad la kulantid qof dhashay xilliga burjigan wanka (laxaha) oo aan awood u lahayn inuu dhawr waxyaabood hal mar wada dhammeeyo. Badanaa inta aanay qadada u fadhiisan.
Hayeeshee wax iska caabintoodu waxay muuqataa marka ay cadhoodaan ama ay dagaalamaan ama ay ku xanaaqaan dadka kale. Dadnimadooda adag darteed ee ay keentay dhalashadooda xilliga burjigan wanku (laxuhu) waxay leeyihiin karti ay ugu dagaalamaan hadafkooda. Waxayna tusaale u yihiin isku duubnida iyo wada shaqaynta toolmoon.
Dadka dhasha xilliga burjiga wanku (laxuhu) waa hogaamiyayaal si wacan wax u hogaamiya, had iyo jeer waxay wax ku hogaamiyaan horuu-kac iyaga oo leh hiigsi iyo hadaf. Waa geesiyiin oo waxaa yar in ay ka baqaan tijaabooyinka amase halista.Waxay leeyihiin dhallin- yaranimada xoog iyo tamar, marka ay weynaadana isma dhimaan ee weli si dhakhso leh ayey u qabtaan waxqabad kasta oo loo diro amase la siiyo.
Burjiga wanka (laxaha) waxaa tusmo iyo taariikh u ah sheekada wankii duullayey ee lahaa dhogorta dahabiga ah Markaa sheekada dhexdeeda burjiga wanku (laxuhu) wuxuu u diyaar yahay inuu noqdo geesiga maalinta, oo uu dhabarkiisa ku qaado oo la duullo in baddan oo ka mid ah awood-laawayaasha dadka, kuwaa oo khatar ku jira. Awooda wanku waxay taal dhabarkiisa, wuxuu se yahay sidii dahab, dhalaal soo jiidasho u leh kuwa damacsan in ay khiyaamaan Mucda sheekada wayn ee aan la qaadi karini waxay ku jirtaa labada gees. Hadii aannay ahayn kuwo aan wax soo kordhinayn sida neefka loogu xiirro iyadoo qof laga siinayo funaanad dhaxameed, markaa waxba kuma ay soo kordhin adduunka kuwa sita tilmaantiisuna. Mid kasta oo ka mid ah kuwa dhashay xilliga burjigan wanku (laxuhu) wuxuu leeyahay door uu kaga qayb qaato kaalmaha sida awood, dahabnimo, qaab dhisnaan dadka kale ku majeerto. Balse mararka qaarkood tamartooda ayaa hab socoshadeeda joojisa taasoo keenta cabsi la wareegta oo ay noqoto inay eber ku soo urrurto qorshayaasha wax bixinta & wax qaadashadoodu.
Abwaan Guhaad Cabdi Gahayr
Bankii Cawsha Banka Tuuyo